धेरै मानिसले घोडालाई बसेको अवस्थामा नदेखेका हुन सक्छन् । यसका पछाडि पनि वैज्ञानिक कारण छ । घोडाले उभिदाभन्दा बस्दा दोब्बर उर्जा खपत गर्छ । त्यसैले आफ्नो शरीरको उर्जा बचाउन घोडा बर्स्दैन । पुरा पढ्नुहोस्
जुन देशमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो देशमा नेपाली दूतावास छ–छैन ? छैन भने कुन देशको नेपाली दूतावासले हेर्छ ? बुझ्नुहोस्, राजदूतको नाम तथा फोन नम्बर लिनुहोस् र घरपरिवारमा पनि जानकारी दिनुहोस् । पुरा पढ्नुहोस्
विद्यार्थीका बारेमा हरबखत सोचिरहने शिक्षकहरू विद्यार्थीलाई पढ्दा सहज हुने उपाय सोचिरहेका–खोजिरहेका हुन्छन्, त्यसैले विद्यार्थीले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न कत्ति पनि चुक्नु हुँदैन र दुवैतिरबाट समझदारीको तौल बराबर बनाउनुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , मंसिर ६, २०७५
सन् २०१५ को तथ्यांकअनुसार महिला तथा पुरुष दुवैले प्रयोग गर्ने कन्डम सबैभन्दा बढी खपत गर्ने देश जिम्बावे हो । सन् २०१५ मा जिम्बावेमा १५ करोड ७० लाख थान महिला तथा पुरुष कन्डम वितरण गरिएको थियो । पुरा पढ्नुहोस्
 कन्डम सुरुमा वनस्पतिको दूधबाट बनाइन्थ्यो, पछि त्यसका लागि जनावरको आन्द्रा प्रयोग गर्न थालियो भने बिस्तारै कपडा सिल्क तथा छाला पनि प्रयोग गरियो ।  सोह्रौं शताब्दीमा जनावरको आन्द्राबाट कन्डम निर्माण गरिन्थ्यो जुन महँगो पनि थियो । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , मंसिर ४, २०७५
कन्डम किन्नुअघि त्यसमा के–कस्तो सामग्री प्रयोग भएको छ भन्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । प्रत्येक कन्डमको खोलमा प्रयोग भएका मेटरियलका सम्बन्धमा जानकारी गराइएको हुन्छ । कन्डम किन्नुअघि उक्त जानकारी पढ्नुपर्छ तर हामीमध्ये धेरैलाई त्यो हेर्ने फुर्सद हुँदैन । पुरा पढ्नुहोस्
‘भूकम्प आउदाँ नबोलाए पनि दोब्बर भाडा दिएर हेलिकप्टर नै चार्टर गरी राहतमा कन्डमसमेत बाँड्न आउने संस्थाहरू बाढीग्रस्त जिल्लामा जान्छन् कि जाँदैनन्, हेर्न बाँकी नै छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , मंसिर ३, २०७५
नेपाल सरकारको एक अध्ययनअनुसार कात्तिक र मंसिर महिनामा नेपालमा कन्डमको खपत बढी हुने गरेको छ । अन्य महिनामा सरदर २५ लाख कन्डम खपत हुन्छ भने ती दुई महिनामा झन्डै ३२ लाख कन्डम खपत हुने राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र टेकुले जनाएको छ । पुरा पढ्नुहोस्